फेदीखोलाको क्वारेन्टाइनमा रहेका ९ जना घर फिर्ता • Pokhara News by Ganthan
फेदीखोला २०, चैत/ स्याङ्जाको फेदीखोला गाउँपालिकाले बिहीबार ९ जना गाउँपालिकावासीलाई क्वारेन्टाइन स्थलबाट घर फिर्ता भएका छन् । विदेशबाट नेपाल आएका वडा नं ३ का विजय रानाभाट र जिवन भुजेल, वडा नं. ४ का कुमार रानाभाट, वडा नं. २ का सुन्दर गुरुङ र चन्द्रबहादुर क्षेत्री तथा वडा नं. १ का राजेश गुरुङलाई घर पठाइएको हो ।
त्यसैगरि क्वारेन्टाइनबाट फिर्ता हुनेमा राजेश गुरुङकि श्रीमती भगवती गुरुङ, छोरी प्रिना गुरुङ र सुन्दर गुरुङकी श्रीमती सीता गुरुङ पनि रहेका छन् । नेपाल प्रवेश गरेको मितिले १४ दिन नाघेपछि उनीहरुलाई फिर्ता गरिएको हो । क्वारेन्टाइनमा बसेर विषम परिस्थतीमा सामाजिक उत्तरदायित्व पुरा गरेको भन्दै उनीहरुलाई १ हजारको दरले प्रोत्साहन रकम पनि व्यवस्था गरिएको थियो ।
जसमध्ये वडा नं. १ का राजेश र २ का चन्द्रबहादुर संक्रमितसँगै हवाइ उडानमा आएका थिए । संक्रमितसँगै आएका उक्त २ जना र राजेश गुरुङ कि श्रीमती गरि ३ जनाको स्वाब परिक्षण गर्दा रिर्पोट नेगेटिभ देखिएको छ । हाल सबैको अवस्था सामान्य रहेको गाउँपालिका स्वास्थ्य शाखा संयोजक खिलप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए ।
क्वारेन्टाइन अवधिभर दैनिक १ पटक स्वास्थ्य परिक्षण गरिदै आइएको पौडेलले बताए । जटिल किसिमका समस्या देखिएमा पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालमा रिफर गर्न २ वटा एम्बुलेन्स अर्लटमा राखिएको स्वास्थ्य शाखाले जानकारी दिएको छ ।
हालसम्म देशैभर ६ जना व्यक्तिलाई कोभिड १९ को संक्रमण देखिएको छ, संक्रमित व्यक्ति सबै विदेशबाट फर्किएका हुन । विदेशबाट फर्किनेमा संक्रमणको उच्च संभावना हुन सक्ने भन्दै पालिकाले विदेशबाट भित्रिने व्यक्तिको लगत संकलन गर्दै आएको छ । पाँचै वटा वडामा जनप्रतिनीधि, कर्मचारी, टोलसुधार तथा सुरक्षाकर्मी सम्मिलित समितिले पछिल्लो १० देखि १५ दिन भित्र भित्रिएका ३४ जनालाई सम्पर्कमा ल्याएको छ ।
जसमध्ये भारतबाट १५ जना, जापानबाट २ जना, ओमनबाट १ जना, कतारबाट २ जना, दुवईबाट १३ जना र बहराइनबाट १ जना रहेका छन् । हाल ३ जना सामुहिक क्वारेन्टाइनमा रहेका छन् भने २८ जनालाई होम क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरिएको छ । गाउँपालिकाले पाँचैवटा वडामा क्वारेन्टाइन स्थल निर्माण गरेको छ, वडा नं. २ मा ३० बेड र अन्य चारवटा वडामा १०–१० बेड गरि ७० बेडको क्वारेन्टाइन क्षमता पालिकासँग छ ।
कोरोनाभाइरसको त्रास र संक्रमणसँगै बजारमा स्यानिटाइजरको माग बढ्दै गएपछि गाउँपालिकाले आँफैले स्यानिटाइजर निर्माण गरेको छ । स्थानीय दक्ष जनशक्तिद्वारा पालिकाको आर्थिक लागतमा ८० लिटर स्यानिटाइजर उत्पादन गरिएको हो । त्यसैगरि किटाणुहरु मार्नको लागि ५० लिटर डिसइनफेक्टेन्ट स्प्रे पनि पालिकाले उत्पादन गरेको छ ।
देशभर लकडाउन हुनु अगावै स्याङ्जा तथा अन्य जिल्ला छिर्ने कुभिण्डे नाकामा हेल्थ डेक्स संचालन ल्याएको गाउँपालिकाले डेक्सलाई थप प्रभावकारी बनाएको छ । ११ दिनदेखि सञ्चालित डेक्समा हालसम्म ३६ हजार बढि यात्रु तथा भित्रिने व्यक्तिको ज्वरो परिक्षण गरिसकिएको छ ।
लकडाउनका कारण अवरुद्ध यातायात तथा आवतजावतका कारण नियमित सेवन गर्ने औषधिको अभाव हुन नदिन गाउँपालिकाले घरघरमा औषधी पुर्याउने व्यवस्था पनि गरेको छ । गाउँपालिकाले खटाएका व्यक्तिलाई सम्पर्क गरेर पालिकावासीले औषधी सेवा आफ्नै घरदैलोमा पाएका छन् ।
त्यसैगरि मुटुरोगी र मृगौला डाइलोसिस गर्ने बिरामीको लागि निशुल्क यातायात सेवा सुरुवात गरिएको अध्यक्ष घनश्याम सुवेदीले बताए । अध्यक्ष सुवेदीका अनुसार पालिकाले खाद्यान्न व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाइएको छ भने विपन्न तथा दैनिक रोजीरोटी चलाउन कठिन हुने नागरिकको तथ्यांक संकलन गरि राहत वितरणको तयारी गरिएको छ ।